३५ लघुवित्तले गरे लाभांश घोषणा, यी हुन् बुक क्लोज हुन बाँकी लघुवित्त « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७८, आईतवार १३:२२
१२ मंसिर, काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकृत लघुवित्तहरुले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्दै छ । हालसम्म ३५ लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्।
यी मध्ये १० लघुवित्तको बुक क्लोजको मिति तय भएको छ भने १६ लघुवित्तको हुन अझै बाँकि रहेको छ। लगानीकर्ताले उक्त लघुवित्तको शेयर किन्दा अझै लाभांश पाउन सक्नेछन् ।
सम्म लाभांश घोषणा गर्ने लघुवित्तहरु मध्येमा महिला लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
लघुवित्तले ४७..५ प्रतिशत बोनस शेयर र २.५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, हालसम्म सबैभन्दा कम एनआईसी एसिया लघुवित्तले ५.४१ नगद लाभांश मात्रै घोषणा गरेको छ।
हेरौं कुन लघुवित्तको लाभांश कति ?
नोटः चार लघुवित्तको लाभांश चार्टमा समावेश छैन । चार्टमा समावेश नभएका तर, लाभांश घोषणा गरेका छन् । इन्फिनिटी लघुवित्तले २७.७० प्रतिशत बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ १.४६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २९.१६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै, कालिका लघुवित्तले १३ प्रतिशत बोनस शेयर, साना किसान विकास लघुवित्तले २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ३१ प्रतिशत नगद गरी कुल २६ दशमलव ३१ पूतिशत र निर्धन उत्थान लघुवित्तले २९.५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १.५५२६ प्रतिशत नगद गरी कुल ३१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको उपकार लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
डिप्रोक्स लघुवित्तको मुनाफा ३३ करोड ४४ लाख, ईपीएस कति ?
आठ लघुवित्त कम्पनीले गरे दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, कुनको मुनाफा कति ?
आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?